Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro: ny farany avo lenta an'ny Huawei
Ny andro nandrasantsika dia efa tonga. Ny Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro vaovao dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Ny marika sinoa dia lasa iray amin'ireo mpilalao lehibe eo amin'ny tsena amin'ny taona 2018. Ny fivarotana azy dia nitombo be, ary nahita fiakarana lehibe amin'ny finday izahay. Zavatra iray izay mazava indray ao anatin'ity zotram-telefaona vaovao ity.
Miaraka amin'ireo Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro, Ny marika sinoa dia mikasa ny hanatsara izay niasa tsara tamin'ny laharana P20, natolotra tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity. Ka finday misy kalitao roa no miandry antsika, miaraka amina endriny ankehitriny. Inona no azontsika antenaina amin'ireo telefaona ireo?
Ireo modely roa ireo efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity hetsika nokarakarain'i Huawei ity tany Londres. Ka efa fantatsika ny mombamomba azy feno. Miresaka momba ny tsirairay amin'ireo maodely roa isika izao. Mba hahafantaranao bebe kokoa momba ny telefaona tsirairay avy ao amin'ny laharana farany avo lenta an'ny Huawei.
Manomboka amin'ny telefaona manome ny anarany an'ity mpanamboatra avo lenta ity izahay. Tao anatin'ireny volana ireny dia nisy ny fivoahana, izay nahafahanay nahafantatra vaovao sasany momba izany. Saingy androany vao nahazo ny angon-drakitra rehetra momba ity farany ity isika. Ireto ny masontsivana feno an'ny Huawei Mate 20:
Famaritana teknika Huawei Mate 20
modely Mate 20
Operating System Android 9.0 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.0
efijery 6.53-inch FHD + miaraka amin'ny 18.7: 9 HDR ratio
Tahiry anatiny 128 GB (azo zahana amin'ny NMCard)
Fakan-tsary aoriana 16 + 12 + 8 MP miaraka amina vava f / 2.2 /1.8 sy f / 2.4
Fakan-tsary aloha MP 24 miaraka amina f / 2.0 aperture
Fitaovana hafa IP53 NFC Rear fantsom-pikantsary HiVision fanekena tarehy
bateria 4.000 mAh miaraka amin'ny famahana haingana sy tsy misy tariby
lafiny 157 x 75 x 7.9 mm ary lanja 193 grama
Ity Huawei Mate 20 ity dia miloka amin'ny efijery lehibe indrindra amin'ireo fitaovana roa natolotry ny mpanamboatra. Hanana efijery 6,53-inch io. Mahita fahitana ao isika, na dia amin`ity tranga ity dia ny notch amin`ny endrika rano indray mitete. Kely kokoa sy malina kokoa izy io, noho izany tsy dia manjaka loatra amin'ny efijery. Azo antoka fa maro no resy lahatra kokoa amin'ity famolavolana ity amin'ny sehatra avo lenta. Na dia mazava aza fa tonga tany an-tsena ireo notch mba hijanona.
Amin'ity taranaka vaovao ity, Ny marika sinoa dia manolotra ny fakantsary triple aoriana amin'ny maodely roa. Ity Huawei Mate 20 ity koa tonga miaraka amina fakan-tsary telo. Izy io dia fitambaran'olom-bolo vita amina sensor 12-megapixel lehibe miaraka amina f / 1.8, sensor 16-megapixel hafa manana zoro f / 2.4 sy 17mm aperture, ary sensor 8-megapixel farany ho an'ny telefaona. Izy ireo dia hampiasa herinaratra artifisialy, izay hahafahantsika manana fomba fakana sary fanampiny amin'ny fotoana rehetra. Anisan'ireny isika dia hisy fiatraikany toy ny bokeh na ny mombamomba ny sary.
Ny bateria dia iray amin'ireo tanjany. Izy io dia lehibe kokoa noho ny an'ny taranaka teo aloha, manana fahaizana 4.000 mAh amin'ity tranga ity, ary miaraka amin'ireo fiasa toy ny famandrihana haingana sy tsy misy tariby izay tsy isalasalana fa handresy lahatra ny mpanjifa. Na dia ny maodely hafa aza ny rafitra famahanana haingana dia haingana. Amin'ny maha rafitra fiasa azy dia miaraka amin'ny Android 9.0 Pie ilay izy ary ilay kinova farany farany an'ny EMUI, kinova 9.0 an'ny sosona fanaingoana.
Ho an'ireo mpampiasa liana, azo atao ny mividy telefaona amin'ny loko isan-karazany. Ho hita amin'ny volondavenona, maintso, mainty ary manga izy io. Ny kinova Twilight dia natokana ho an'ny maodelin'ny Pro ihany.
Amin'ny toerana faharoa no ahitantsika an'io maodely hafa io. Ny Huwei Mate 20 Pro no lasa faharoa avo lenta ny marika sinoa amin'ny fananana fakantsary telo aoriana. Ny marika dia nanjary iray amin'ireo mari-pahaizana eo amin'ny sehatry ny fakana sary noho ny habeny avo lenta, zavatra tadiavin'izy ireo hitazona amin'ity modely ity. Na dia tsy misongadina ho an'ny fakantsariny fotsiny aza izy io, satria amin'ny ambaratonga famaritana dia tsy diso fanantenana izy. Ireto misy famaritana feno an'ny Huawei Mate 20 Pro:
Famaritana teknika Huawei Mate 20 Pro
modely Mate 20 Pro
efijery 6.39-inch OLED miaraka amin'ny vahaolana QHD + ary ny tahan'ny 19.5: 9
Tahiry anatiny 128 GB (azo zahana amin'ny karatra NMCard)
Fakan-tsary aoriana 40 + 20 + 8 MP miaraka amina vava f / 1.8 f / 2.2 ary f / 2.4 LED flash
Fakan-tsary aloha MP 24 miaraka amin'ny f / 2.0
Conectividad GPS Bluetooth 5.0 USB Type-C Wifi ac sy LTE Cat 21
Fitaovana hafa Fijerena sensor IP68 fanamarihana an-tsary HiVision 3D fanamarihana fanao amin'ny efijery an-tsary
bateria 4.200 mAh miaraka amina famahanana haingam-pandeha 40W ary tsy misy tariby 15 W
lafiny X X 157.8 72.3 8.6 MG
vidiny 1049 euros
Ny marika sinoa dia manome antsika avo lenta izay tsy isalasalana fa eo an-tampon'ny Android amin'ny resaka famaritana. Ary koa ny endriny, miaraka amin'ny lamosina miverina. Ny orinasa dia nanolotra karazana fitaratra vaovao ho an'ny fitaovana, izay mora kokoa ny mitazona azy ary manakana azy tsy hiala eo an-tananao rehefa mitazona azy. Hita amin'ny loko isan-karazany: Green emeraoda, mainty, manga amin'ny misasakalina, volamena miloko ary ny loko Twilight, ny gradient, toy ny an'ny P20 Pro. Io no singa manintona ny saina indrindra.
Ny Huawei Mate 20 Pro dia manana bateria 4.200 mAh, izay fandrosoana mihoatra ny taranaka teo aloha, ankoatry ny mpifaninana lehibe aminy. Ankoatr'izay, ny marika dia mampiditra ny famandrihana haingana dia haingana ny 40W. Haingana 70% noho ny famerenam-bidy avy amin'ny marika hafa. Ka ny telefaona dia azo averina hatramin'ny 70% ao anatin'ny 30 minitra monja. Ampidirina koa ny famerenana amin'ny laoniny tsy misy tariby, izay mamela ny famandrihana finday na kojakoja hafa miaraka amin'ilay fitaovana. Ka aseho fa ny bateria dia hanome fahaleovan-tena lehibe antsika, ka ahafahantsika maka fitaovana hafa miaraka aminy.
Ny fifandraisana sy ny hafainganana dia fanalahidy hafa. Raha ny filazan'ny orinasa ihany dia azo atao ny misintona horonantsary HD ao anatin'ny 10 segondra fotsiny. Ary ny fifandraisana amin'ny Internet dia handray soa, afaka mivezivezy amin'ny Internet miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa isika amin'ny fotoana rehetra. Lafiny iray hafa izay mihatsara amin'ity faratampon'ny orinasa ity.
Ny fakantsary dia iray amin'ireo tanjaka ary hisarika ny sain'ny maro an'ity Huawei Mate 20 Pro ity. Fakan-tsary telo aoriana, voalamina amin'ny endrika efa-joro amin'ny telefaona, eo akaikin'ny LED Flash. Izy io dia ampiasain'ny faharanitan-tsaina artifisialy, izay hanampy antsika haka sary tsara kokoa amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Milaza ny marika fa azo atao ny maka sary amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Hanana fiasa toy ny maody sary na bokeh effet ihany koa isika, ankoatry ny maro hafa. Ny fakantsary dia iray amin'ireo lakilen'ity avo lenta ity. Tsy handiso fanantenana na inona na inona izy ireo.
Izy io koa dia miaraka amin'ny fanamarinana IP68, izay mamela ity Huawei Mate 20 Pro ity hanohitra mandritra ny 30 minitra amin'ny rano 2 metatra ny halaliny. Ka izy ihany koa dia mahazaka splash sy vovoka, izay tsy isalasalana fa hanome fiadan-tsaina be ho an'ny mpampiasa raha sendra lozam-pifamoivoizana. Tsy hisy hitranga amin'ilay fitaovana.
Ny fitaovana dia misy fiasa fanampiny isan-karazany, noho izy satro-boninahitra modely matanjaka indrindra. Ny sensor sensor dia nampidirina tao amin'ny efijery raha izany dia. Ho fanampin'izay, manana sensor momba ny endrika endrika 3D izy, izay hahafahan'ny mpampiasa manokatra ny telefaona amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia rafitra iray mitovy amin'ilay fantatsika avy amin'ny Face ID. Ary koa, manana fiasa toa an'i HiVision izahay, izay karazana Google Lens. Hanome antsika ny fahafantarana ny zavatra amin'ny fotoana rehetra-
Andro vitsy talohan'ny fampisehoana nataon'izy ireo dia tafaporitsaka ny vidin'ireny telefaona ireny. Ka mahaliana ny manamarina raha marina na tsia ireo fivoahana ireo. Mazava fa tsy finday mora vidy ireo Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro ireo, ary ho iray amin'ireo lafo indrindra amin'ny katalaogin'ny marika sinoa.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny telefaona roa dia ho hita amin'ny loko isan-karazany. Raha ny Mate 20 dia izy ireo: volondavenona, manga, mainty ary maitso. Na dia misy aza ny Mate 20 Pro amin'ny: emeraoda maintso, manga amin'ny misasakalina, volamena mena ary mainty ary Twilight, izay feo manjelanjelatra, malaza be amin'ity taona ity.
Hanomboka hamidy ny Huawei Mate 20 amin'ity volana oktobra ity, ka tsy ho ela dia hiroso amin'ny tsena izy io. Tsy misy afa-tsy fampifangaroana RAM sy fitehirizana anatiny, izay 4/128 GB. Ity fitaovana ity dia hamely ny tsena espaniola amin'ny vidiny 799 euro.
Etsy ankilany manana ny Huawei Mate 20 Pro isika. Izy io no lafo indrindra amin'ireo telefaona roa an'ny orinasa, ny vidiny any Espana dia 1.049 euro. Vidiny avo dia avo tokoa, izay mifanindran-dàlana amin'ny fivoahan'ny herinandro lasa izay, izay nilaza fa io no vidiny mety hitranga any Eropa. Toy ny maodely hafa dia halefa amin'ity volana oktobra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro: ny farany avo lenta an'ny Huawei
Ny Xiaomi Black Shark 2 dia efa manana daty fampisehoana